ढोरपाटनका बाढी पहिरो पीडितलाई गाँसको भन्दा ऋणको चिन्ता ! - नेपालबहस
ढोरपाटनका बाढी पहिरो पीडितलाई गाँसको भन्दा ऋणको चिन्ता !
| १६:०३:०७ मा प्रकाशित
२५ भदौ, बागलुङ । ढोरपाटन नगरपालिका—९ बोबाङ्गका बाढीपहिरो पीडितलाई अहिले गाँसबास भन्दा ऋणको समस्याले पिरोलेको छ । यही भदौं १७ गते राति ढोरपाटन नगरपालिकाको भुजीखोलामा आएको बाढीले तटीय क्षेत्रका घर बगाउँदा बोबाङ्गका स्थानीयवासीलाई साहुको ऋण अब कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।
जसोतसो ऋणधन गरेर बनाएका घरसँगै आफन्तलाई पनि बाढीले बगाएपछि अब साहुको ऋण कसरी तिर्नु भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको उनीहरुको भनाइ छ । “बाढीपहिरो आउने समयमा भागेर ज्यान बचाएकाहरुको न त व्यापार गर्ने सामग्री रहयो, न त व्यापार गर्ने ठाउँ नै”, स्थानीय व्यापारी हेमबहादुर विश्वकर्माले भने, “बसेको ठाउँ बगर बनेपछि साहुको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले साताउन थालेको छ ।”
विगत १२ वर्षसम्म साउदीमा काम गरेर घर फर्किएका विश्वकर्माले बोबाङ्गमा सानो पसल थापेर व्यापार शुरु गरेका थिए । “शुरु शुरुमा त्यती राम्रोसँग नचलेको पसलबाट परिवारको जिविका चलाउन सहज होला भन्ने लागेन”, उनले भने, “परिवारको जिविका चलाउनका लागि त्यो पसललाई केही ठूलो बनाएर दैनिक उपभोग्य सामानहरु राख्ने सोचका साथ साहुसँग ऋण लिएर पसललाई बिस्तार गरें । तर भुजीखोलामा आएको बाढीले पसलसँगै आफ्नो सपनालाई समेत बगाएर लगिदियो ।” अहिले उनलाई साहुको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।
“सधैंझै खाना खाएर सुतिसकेपछि मध्यरातमा एक्कासी गड्याङगुडुङसहित ठूलो आवाज भयो । जमिन पूरै हल्लियो । कहाँ के भयो थाहा भएन । बाहिर निस्केर म चिच्याउन थालें”, बिकले भने, “चिच्याएको मेरो आवाज सुनेर घरपरिवारका सबै जना बाहिर निस्के । म बाहिर निस्केर नचिच्याएको भए मेरो परिवारलाई पनि घरैसहित खोलाले बगाएर लाने थियो होला ।” उनले भने, “मेरो चिच्याइले परिवारका सबै सदस्य बाहिर निस्केका कारण बच्न त सफल भयो तर त्यो बाढीले मेरो घर, खाद्य गोदामसहित भएभरको सम्पति बगायो ।” पैसा र सुन निकाल्ने लोभका कारण धेरै जनाले अकालमै ज्यान गुमाएको उनको भनाइ छ ।
बिकलाई आफ्नो घर सम्पत्ति बगेको जति पीडा छ त्योभन्दा बढी पीडा अब कसरी ऋण तिर्न सकिन्छ भन्ने छ । विभिन्न पसल र साहु गरी करीब रु १८ लाखभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । “न खाना खान मन लाग्छ, न निद्रा नै लाग्छ”, उनले लगाएको टिसर्ट र हाफ पाइन्ट देखाउँदै भने – “यहिँ पनि अरुले दिएका हुन्, केही सोच्नै सकेको छैन टाउका घुमाउँछ, ऋणको पासोले मेलोबाटो पाइन ।”
सिगानाको स्वास्थ्य चौकी पहिरोको उच्च जोखिममा ११ घण्टा पहिले
मनसुन शुरु भएयता गण्डकीमा १२६ जनाको मृत्यु २२ घण्टा पहिले
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका २६ घर पहिरोको उच्च जोखिममा २ दिन पहिले
आजदेखि मौसममा क्रमिक सुधार, पूर्वी नेपालमा वर्षा ! २ दिन पहिले
बेगखोलामा पुल नबन्दा बिरामीलाई सास्ती २ दिन पहिले
पहिरोमा ज्यान गुमाएका नौ जनाको राम्दीमा सामूहिक दाहसंस्कार २ दिन पहिले
संसारका खानीमा कति सुन बाँकी होला ? ११ मिनेट पहिले
मुक्तिनाथ रेमिटको सेवा अब अष्ट्रेलियाबाट पनि ४४ मिनेट पहिले
जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा ९ जना पक्राउ ५३ मिनेट पहिले